Hindiya ayaa sheegtay in ay go’doon dhammaystiran galinayso dalka Pakistan kadib markii qof i | Gaaroodi News
Hindiya ayaa sheegtay in ay go’doon dhammaystiran galinayso dalka Pakistan kadib markii qof i
Frankfurk(Gaaroodinews)Hindiya ayaa sheegtay in ay go’doon dhammaystiran galinayso dalka Pakistan kadib markii qof isasoo miidaamiyey uu 46 Askari ku dilay gobolka ay Hindiya maamusho ee Kashmir.
Arun Jaitley oo ah wasiir heer federal ah ayaa sheegay in Hindiya ay qaadi doonto “Tallaabo kasta oo diblumaasiyadeed oo suurto gal ah” si Pakistan ay uga go’doomiso beesha caalamka.
Hindiya ayaa Pakistan ku eedaynaysa in ay ku guuldarraysatay in ay wax ka qabato kooxaha mintidiinta ah kuwaas oo Hindiya ay sheegtay in ay weerarka soo qaadeen.
Weerarkan ayaa ahaa kii ugu dhimashada badnaa ee ka dhaca gobolka lagu muransan yahay ee Kashmir.
Hindiya iyo Pakistan ayaa labaduba sheegta lahaanshaha gobolka ay Muslimiintu u badan yihiin ee Kashmir, hase ahaatee midkoodna si buuxda uma xukumo.
Tallaabo caynkee ah ayay Hindiya qaadaysaa?
Hindiya ayaa sheegaysa in kooxda weerarka ka dambaysay oo lagu magacaabo Jaysh Muxamed, ay muddo dheer gabbaad ka dhiganaysay gudaha dalka Pakistan waxayna dalkaas ay dariska yihiin ku eedaysay in uu ku guuldarraystay soo afjaridda kooxdaas.
Hindiya ayaa ku baaqday in cunaqabatayn caalami ah lagusoo rogo kooxda Jaysh Muxamed, waxayna sheegtay in Golaha Ammaanka ee Qaramada Midoobay ay ka doonayso in hoggaamiyaha kooxdaas , Masood Azhar, la galiyo liiska argagixisada.
In kastoo Hindiya ay dhowr jeer isku dayday in ay qaaddo tallaabo ay caynkaas ah, iskudaygaas ayaa waxaa hor istaagay Shiinaha oo ay Pakistan xulufo yihiin.
Mr Jaitley ayaa mar uu maanta warfidiyeenada la hadlayey xilli uu ka qayb galayey Shir ammaanka dalkaas looga hadlayey waxa uu banaanka soo dhigay sida ay Hindiya uga go’an tahay la xisaabtanka Pakistan.
Pakistan ayaa sheegtay in ay aad uga walaacsan tahay duqaymaha hase ahaatee waxa ay beenisay in si uun ay eedaymahaas ugu lug leedahay.
Hase ahaatee kadib markii Raysul Wasaare Narendra Modi uu sheegay in kuwii weerarka ka dambeeyey ay cawaaqib xun la kulmi doonaan, ayaa dad badan oo wax falanqeeya waxa ay filayeen in xukuumadda Delhi ay qaadi doonto tallaabooyin dheeri ah.
Sidee ayuu weerarku u dhacay?
Qofka weerarka qaaday ayaa adeegsaday gaari walxaha qarxa ay ka buuxeen wuxuuna isku qarxiyey ciidamada ammaanka ee Hindiya oo marayey wadada sida wayn loo ilaaliyo ee Srinagar-Jammu oo 20km u jirta magaalada Srinagar.
Hoggaamiyaha mucaaradka Rahul Gandhi iyo laba wasiir oo hore oo kasoo jeeda gobolka Kashmir, ayaa dhammantood isku si u cambaareeyey weerarka kana tacsiyeeyay.
Weerarka ayaa sidoo kale laga canbaareeyey dunida oo idil, waxaana dhinacyada canbaareeyey kamid ah Maraykanka iyo Xoghayaha Guud ee Qaramada Midoobay.